Ny Associated Press (AP) – Assosciated ny asa fanaovan-Gazety (AP) ny fototra sy ny lehibe indrindra, ny masoivohom-baovao ao amin'ny united states. Ny asa dia manana ny endriky ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra.
Ny trano lehibe NOHO ny tany New York
Efa naorina Mety 1848 toy ny "seranan-tsambo Vaovao Ασοσιέσιον" amin'ny fandraisana an-tanana enina gazety ny New York , mba adiresy miaraka ny ara-bola ny vola lany amin'ny asa fanaovan-gazety mikasika ny zava-nitranga rehetra fa ireo zava-nitranga tamin'izany fotoana izany ary, indrindra indrindra, ny AMERIKANA ady amin'ny Meksika (1846 – 1848). Noho izany tany am-boalohany ny anarana hoe "New york street Associated Press".Ao amin'ny taonan'ny 1890 ny AVY, ny tena mpanohitra ny faritra ny United ny asa fanaovan-Gazety (United Gazety), nandray ny tena zava-dehibe fanovana ny endrika izay hita amin'izao fotoana izao. Ny taona 1893 mifandray amin'ny ny malagasy sampan-draharaha Ρώυτερ nandrakotra ny vaovao tao amin'ity Kaontinanta iray ity sy ny fizakana ny Fanjakana Britanika tamin'ny alalan'ny fifanakalozana mitohy vaovao αλληλοπληροφόρηση Amerika sy Eoropa. Taorian'ny blitzkrieg.E. nitarina any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana.
Androany ny NY mifototra amin'ny nosy Manhattan dia sarotra ary ny zavatra maro ny haino aman-JERY, ny zanabolana station (1982), manarona ny zavatra ilaina ny gazety, ny radio sy ny televiziona, newsletters, ny tatitra sy ny sary lehibe, cinematic sy videoskopik rakitra fanangonana sy ny hivory cooperative firenena, niparitaka tao amin'ny eo ho eo 245 ny sampan-draharaha rehetra manerana izao tontolo izao. Ny ankamaroan'ny vaovao dia broadcasting, ary na dia nomerika endrika amin'ny aterineto fa "tratra" arakaraka ny maha-zava-dehibe isan-karazany-pirenena na tsy miankina amin'ny mpiara-miasa vaovao ny MEDIA taorian'ny consensual fahazoan-dalana. Tamin'ny 1994, dia nanokatra ny fahitalavitra ny "ENY-Τελεβίζιον vaovao" monina any Londres.
AP sary tahiry
"Encyclopaedia' ny papirosy Larousse Britannica," ny afo.Faha-11, p.430.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Associated_Press&oldid=795113"
Dernière modification le 14 Janoary 2017, à 18:06
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2017 amin'ny 18:06 ity pejy ity.